कन्स्टाइनले बेहोरेको त्यो बेलाको रंगभेद- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कन्स्टाइनले बेहोरेको त्यो बेलाको रंगभेद
वेस्ट इन्डिज र इंग्ल्यान्डबीचको क्रिकेट कहिल्यै पनि खाली खेलमै मात्र सीमित भएन । जुलाई ८ देखि यी दुई टिम फेरि टेस्ट क्रिकेटका लागि मैदानमा फर्कंदै छन् । तीन टेस्टको यो सिरिज पनि खेलमै मात्र सीमित हुन्न, यसका धेरै आयाम छन् । ठीक यही बेला ल्यारी निकोलस कन्स्टाइनबारे पनि केही लेख्नैपर्ने बेला आएको छ । भन्नुपरेको छ, सुरूआती दिनमा यी अश्वेत खेलाडीले के कस्तो रंगभेद बेहोर्नुपरेको थियो ।
असार २३, २०७७ द गार्डियन
लन्डन — सन् १९२९ मा ल्यारी कन्स्टाइन पहिलोपल्ट नेल्सन आइपुगेका थिए । त्यतिबेला उनी सहरमा रहेका एकमात्र अश्वेत थिए ।
स्कुले केटाकेटीहरू उनलाई एकपल्ट हेर्न घरैसम्म पुग्थे । उनीहरूमा व्यापक कौतूहल थियो, आफ्नो सहरको स्थानीय क्लबमा खेल्न आएका यी खेलाडी कसरी पो यति साह्रो काला छन् त ? बाटोमा भेट्दा पनि ती केटाकेटीले सोध्ने गर्थे, ‘के तपाईं कोइला खानीमा काम गरेर आउनुभएको हो ?’
अनि यस्तो पनि प्रश्न हुन्थ्यो, ‘तपाईंको शरीरको कालो साबुनले धोएर जान्छ त ?’ यस्ता प्रश्नले कन्स्टाइन आफैं अप्ठ्यारोमा पर्थे र उनीसँग यसको उत्तर हुँदैनथ्यो । उनलाई के लागेको थियो भने आफूविरुद्ध भएका जति पनि रंगभेदी व्यवहार छन्, ती सबै अज्ञानताले भएका हुन् । आममान्छेलाई कालो मान्छे हुन्छ भनेर थाहा थिएन । तर उनको यो भ्रम धेरै लामो समय टिकेन । उनी आफ्नो विश्वास फेर्न बाध्य भए, जतिबेला उनले पहिलोपल्ट दक्षिण अफ्रिकी अलरान्डर जिम ब्ल्यान्कबर्गलाई भेटे ।
संयोग कस्तो भने कन्स्टाइन उनकै स्थानको क्लबमा आएका थिए । ब्ल्यान्कबर्गले नेल्सनको भन्दा इस्ट लंकासायरबाट राम्रो प्रस्ताव आएपछि नयाँ क्लब जानु नै ठीक माने । भनिन्छ, उनी हदकै रंगभेदी व्यवहार गर्थे । उनले एकपल्ट जमैकाका महान् ब्याट्सम्यान जर्ज हेड्लीसँग बसेर सँगै खान पनि अस्वीकार गरेका थिए । किनभने उनी गोरा थिए, हेड्ली अश्वेत । उनी भन्ने गर्थे, ‘म त्यस ठाउँबाट आएको हुँ, जहाँ अश्वेतसँग बसेर खानु राम्रो मानिन्न ।’
संयोग कस्ता नभने कन्स्टाइन आएयताको पहिलो खेल नै नेल्सन र इस्ट लंकासायरबीच थियो । यो खेललाई लिएर कति धेरै कौतूहलता जागेको थियो भने त्यसलाई प्रत्यक्ष हेर्न १० हजारभन्दा बढीको भीड लागेको थियो मैदानमा । खेल सुरु हुनुअगाडि कन्स्टाइनले ब्ल्यान्कबर्गसँग हात मिलाउन खोजे तर उनले मानेनन् । कन्स्टाइनले हात अगाडि बढाउँदा पनि ब्ल्यान्कबर्गले आफ्नो हात पछाडि लगेका थिए । स्वाभाविक थियो, कन्स्टाइनले खुबै नराम्रो माने ।
त्यसको बदला भने उनले मैदानमा लिने प्रयास गरे, उनलाई सुरुमै बलिङको अवसर दिइयो । ब्ल्यान्कबर्गविरुद्ध उनले लगातार शर्ट बल फाले र यो ठ्याक्कै ‘बडीलाइन’ को थियो । यो शब्दावली सिर्जना हुन अगाडि नै कन्स्टाइनले उस्तै घातक बलिङ गरे । ब्ल्यान्कबर्गले ७७ रन त बनाए, तर आफ्नो टिमलाई हारबाट बचाउन सकेनन् । पूरा इस्ट लंकासायर टिम १ सय २७ रन बनाएर अलआउट भएको थियो र नेल्सनले ४ विकेट हात पारे ।
खेलपछि ब्ल्यान्कबर्ग नेल्सनको ड्रेसिङ रुममै गएर कन्स्टाइनको बलिङले आफ्नो शरीरमा कति धेरै चोट लागेको थियो भनेर देखाउन गए । यसपल्ट बेवास्ता गर्ने पालो कन्स्टाइनको थियो । पूरा घटनाको कति धेरै वर्षपछि फेरि इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजबीच टेस्ट सिरिज सुरु हुन लागेको छ । वेस्ट इन्डिज टिमले निर्णय गरिसकेको छ, खेलका क्रममा तिनका खेलाडीले लगाउने जर्सीमा लेखिनेछ, ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ । यस्तो बेला पुरानो दिनका कन्स्टाइनलाई सम्झनु त जायज नै हुनेछ ।
खासमा कन्स्टाइन गज्जबका असाधारण मान्छे थिए, उनले खेल्न छाडेपछि इंग्ल्यान्डमा खुबै नाम कमाए । ती पुराना दिनमै रंगभेदविरुद्ध जमेर लडे । होटल इम्पेरियलले आफूविरुद्ध रंगभेदी व्यवहार गरेपछि कानुनी उपचार खोजे र पछि त्यसमा जित निकाले । इंग्ल्यान्डमा रंगभेदी व्यवहारविरुद्धका कतिपय कानुन बनाउनमा उनको ठूलो हात रह्यो । इंग्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजले खेल्ने त मैदानमै हो, विज्डन ट्रफीका लागि । तर कन्स्टाइनको सम्मानमा यसपल्ट नयाँ ट्रफी पनि बन्दै छ ।
प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०९:४४
‘लाइभ’ गरेर ‘लाइफ’ समाप्त !
सामाजिक सञ्जालमा पूर्वजानकारी दिएर र ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरेर आत्महत्याका घटना बढ्दै । विज्ञ भन्छन्– ‘आफन्त र साथीहरूले समयमै पहिचान गर्ने र साथ दिने हो भने बचाउन सकिन्छ ।’
असार २३, २०७७ जनकराज सापकोटा, गोकर्ण गौतम
काठमाडौँ — १८ असारको मध्यरातमा दाङ तुलसीपुरकी २३ वर्षीया एलिसा गौतम फेसबुक लाइभमा आइन् । उनी सार्वजनिक महत्त्वको कुनै कुरा सुनाउन वा आफ्नो प्रतिभा देखाउन लाइभमा आएकी थिइनन् । अनुहार मलिन थियो । घरी नमस्ते गर्थिन्, घरी रुन्थिन् । उनको यो अस्वाभाविक गतिविधि देख्नेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ र प्रहरीको साइबर ब्युरोसम्म खबर पुर्‍याए । तर उनको कोठासम्म प्रहरी नपुग्दै उनले लाइभमार्फत दुनियाँलाई थाहा दिएर आफैंलाई सिध्याइसकेकी थिइन् ।
एलिसाले आत्महत्या गर्न लागेको सूचना राति नै काठमाडौंमा रहेको प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि पाएको थियो । ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्यालका अनुसार फेसबुक लाइभको लिंकका आधारमा एलिसाको लोकेसन र उनलाई तत्काल उद्धार गर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिको पहिचान राति नै गरिसकिएको थियो । ब्युरोले सिंगापुर र अमेरिकामा रहेको फेसबुक कार्यालयको आत्महत्यासम्बन्धी घटनाहरू केलाउने शाखामा सम्पर्क गरेर केही सूचना लिएको थियो । त्यस्तो सूचनाका आधारमा उनीहरूले आत्महत्या गर्ने युवतीको छिमेकीलाई पनि सम्पर्क गरेका थिए । एसएसपी अर्याल भन्छन्, ‘अरू कैयन् घटनामा हामीले समयमै आत्महत्या गर्ने तरखर गरिरहेकाहरूलाई बचाएका थियौं । तर, यो घटनामा सकिएन ।
दाङ घटनाको दुई दिनपछि चितवनमा उस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरियो । असार २१ गते राति साढे ९ बजेतिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा टोल फ्री नम्बर १०० मार्फत सूचना आयो– ‘एउटी युवती फेसबुकमा लाइभमा आत्महत्या गर्दैछिन् ।’ प्रहरी कार्यालयबाट करिब ५ सय मिटर दूरीमा रहेको घरमा पुग्दा १९ वर्षीया ती युवतीले आत्महत्या गरिसकेकी थिइन् ।
जगतपुर घर भई भरतपुरको स्याउली बजारमा अन्य दुई साथीसहित फ्ल्याटमा बस्ने युवती घटनाका बेला एक जना साथीसँग थिइन् । प्रहरीका अनुसार दुवैले मदिरा सेवन गरेको र कसैसँग फोनमा केही विवाद भएपछि युवती आफ्नो कोठामा छिरेर आत्महत्या गरेको देखिन्छ । ढोका फोरेर प्रहरी पुग्दा उनको मोबाइल खुल्लै थियो र फेसबुकमा सबै दृश्य लाइभ भइरहेको थियो । जिप्रका चितवनका प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाले आत्महत्याको कारण यकिन नखुले पनि विवादपछि आवेगमा आत्महत्या गरेको हुन सक्ने बताए ।
लकडाउनयता मात्रै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सूचना सार्वजनिक गरेर आत्महत्याको प्रयास गर्न खोज्ने दुई जनालाई प्रहरीले बचाइसकेको छ । यो संख्याले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूमा कसरी आफ्नो जीवन सिध्याउने गम्भीर घटना दुनियाँलाई बताउने प्रवृत्ति देखिँदै छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । भलै लाइभमा आफैंलाई सिध्याउने घटना नेपाली समाजका निम्ति नयाँ होइन ।
‘युवामा नयाँ प्रयोग गरौं भन्ने हुन्छ, अरूको ध्यान तान्न र देखाउन पनि फेसबुकमार्फत देखाउन खोजिएको हुन सक्छ,’ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. अजय रिसाल भन्छन्, ‘निराशालाई सहने क्षमता घटेको छ । अलिकति समस्या हुनासाथ मरिहाल्छु भन्ने ठान्छन् ।’
विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्छन् । कोरोना महाव्याधिले यो संख्या अझ बढ्ने विज्ञहरूको दाबी छ । नेपालमै प्रतिदिन औसतमा १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहमा मृत्युको दोस्रो कारण आत्महत्या हो । यही उमेर समूह फेसबुकमा अत्यधिक सक्रिय हुने गर्छ । नेपालमा फेसबुक लाइभमा आत्महत्या गर्ने र गर्न खोज्ने पनि युवायुवती नै छन् ।
२१ असोज २०७५ मा चितवन कालीकानगर बस्ने २५ वर्षीय निश्चल तामाङले राति ९ बजेतिर फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘समथिङ भेरी सिरियस गोइङ टु ह्याप्पन । आई विल बी लाइभ एट टुभेल । प्लिज डु रेकर्ड माई लाइभ ।’ यस्तो लेखेको केही घण्टापछि लाइभमा देखापरेका ट्याटु आर्टिस्ट निश्चलले आफूलाई पासो लगाए । उनले आत्महत्या गर्न लागेको सूचना नजिकका साथीभाइ र प्रहरीले थाहा त पाएको थियो । तर मध्यरातमा लोकेसन पत्ता लगाउन र आफन्तलाई सम्भावित घटनाबारे खबर दिएर प्रहरीले उनलाई बचाउन सकेन । उनी लागूऔषध दुव्र्यसनमा फसेका थिए । उनी ठ्याक्कै के कारणले आत्महत्या गर्न अग्रसर भए भन्ने अन्तिम निष्कर्ष प्रहरीले निकाल्न नसके पनि निश्चल डिप्रेसनमा फसेको प्रारम्भिक निक्र्योल थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा पोख्त, पढालिखा तर तनावको व्यवस्थापनमा चुक्ने र छिट्टै हतास हुने युवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा देखाएर आफ्नो जीवन सक्काउन अग्रसर भएको देखिन्छ । कतिपय आफैंलाई हानि गर्ने तथा अन्य खालका मनोवैज्ञानिकबाट पीडित हुन्छन् । मनोविद् करुणा कुँवर भन्छिन्, ‘दुनियाँलाई भन्दा आफूलाई चित्त दुखेको मान्छेलाई देखाउन फेसबुक लाइभमा आत्महत्या भएको हुन्छ ।’ उनको भनाइमा त्यस्तो व्यक्तिमा सुषुप्त अवस्थामा आफ्ना वरपरका मान्छेप्रति असन्तुष्टि वा प्रतिशोध पनि हुन सक्छ ।
गत वर्ष फागुन ५ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सूचना आयो– कालीमाटी क्षेत्रमा एक जना युवाले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गर्न खोज्दै छन् । ब्युरोले सूचना उक्त क्षेत्रको सुरक्षा हेर्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीलाई दियो । वृत्तका डीएसपी रुगम कुँवरले तुरुन्तै प्रहरी परिचालन गरेर युवकको घर पत्ता लगाए । कुँवरका अनुसार केही मिनेट मात्रै ढिलो भएको भए ती युवाले आफ्नै ज्यान लिइसकेका हुन्थे । उनले प्रहरीसँग अस्ट्रेलियामा रहेकी प्रेमिकालाई लामो समयदेखि भेट्न नपाएको अनि आर्थिक अभाव भएकाले आत्महत्या गर्न चाहेको बताएका थिए ।
२०७२ फागुनको अन्तिम साता महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने पिलरमा फेसबुकको आयरल्यान्डस्थित कार्यालयबाट इमर्जेन्सी अलर्ट आयो । सोही सूचनाका आधारमा प्रहरीले थाहा पायो, स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका झापाका एक युवकले आफूले आत्महत्या गर्न लागेको भन्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए । महाशाखाले झापा प्रहरीसँग समन्वय गरेर ती युवाको सम्पर्कमा पुग्यो र मनोपरामर्श दियो ।
लाइभमा आत्महत्या गरेका वा गर्न खोजेका अधिकांशको कारण सम्बन्धको उतारचढाव र त्यसैबाट जन्मने डिप्रेसन मुख्य देखिन्छ । जस्तो कि दाङकी युवती पनि पहिलो विवाह र दोस्रो दुवै विवाह सम्बन्ध टुटेपछि माइतीमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । बाबुआमा र दुई बहिनी भारतमै रहेका कारण एक्लै भएकी उनी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तेस्रो व्यक्तिसँग सम्बन्धमा रहेको बताइन्छ । चितवनका निश्चलको श्रीमतीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध थिएन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय मनोचिकित्सा विभागका सहप्राध्यापक रिसाल भन्छन्, ‘नयाँ पुस्ता सम्बन्ध चाहन्छन्, तर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । अर्को सम्बन्धको सुरुवात भइहाल्छ । त्यसमा पनि त्यस्तै नियति दोहोरिएपछि निराशा बढ्छ । कहिलेकाहीं धम्की पनि आत्महत्यामा बदलिने गर्छ ।’ आत्महत्याका पछाडि आफैंलाई क्षति गर्ने व्यक्तित्वजन्य समस्याको पनि भूमिका हुन्छ । कतिपयमा जीवनप्रतिको नैराश्यता, खुसी वा हरेक स–साना कुरा अरूसामु देखाउने बानी हुन्छ । त्यसैले आत्महत्या पनि देखाएरै गर्न खोज्छन् ।
बाहिरी मुलुकमा फेसबुकमा पूर्वजानकारी देखाएर आत्महत्या वा अन्य अपराध गर्ने प्रवृत्ति अझ मौलाएको छ । अघिल्लो वर्ष न्युजिल्यान्डमा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ४९ जनाको ज्यान गएको थियो, यो आक्रमण १७ मिनेटसम्म फेसबुकमा लाइभ भएको थियो । गत वर्षै दिल्ली मेट्रोका एक कर्मचारीले फेसबुकमा देखाएर आत्महत्या गरे । हालसालै बंगलादेशमा फेसबुकमा पूर्वजानकारी दिएर वा लाइभ स्ट्रिमिङ गरेर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्तिबारे अध्ययन गरिएको थियो । ग्लोबल मेन्टल हेल्थमा प्रकाशित उक्त अध्ययनका अनुसार यसरी मर्ने सबै ३५ वर्षमुनिका थिए, त्यसमा पनि पुरुषको संख्या महिलाभन्दा चार गुणा ज्यादा थियो । मर्नेमध्ये ७४ प्रतिशत विद्यार्थी र ७० प्रतिशत राजधानी ढाकाका थिए । ती सबैमा कुनै न कुनै खालको मनोवैज्ञानिक समस्या रहेको पाइएको थियो ।
फेसबुकको ‘अप्रभावकारी’ प्रणाली
फेसबुकले सन् २००६ बाटै आत्महत्या रोकथामका लागि विज्ञसँग सहकार्य सुरु गर्‍यो । सन् २०११ मा त अमेरिकाको आत्महत्या रोकथाम गर्ने सरकारी निकायसँगै समन्वय गर्‍यो । सन् २०१६ मा फेसबुकले लाइभ स्ट्रिमिङको सुविधा ल्यायो ।
यसपछि झन् भिडियो देखाएरै आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्यो । लाइभको दुरुपयोगले आलोचना बढेपछि फेसबुकले सन् २०१७ मा आत्महत्या रोक्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रविधि प्रयोगमा ल्यायो । पहिलो वर्ष नै संसारभर ३ हजार ५ सय मान्छेलाई आत्महत्याबाट बचाउन स्थानीय प्रहरीलाई खबर गरेको फेसबुकको भनाइ छ । फेसबुकसँग प्रयोगकर्ताको पोस्ट, कमेन्ट र भिडियो स्क्यान गर्ने सिस्टम छ, यसबाट तत्काल आत्महत्या गर्न सक्ने प्रयोककर्ताबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । यसले प्रयोगकर्ताको आत्महत्या गर्न सक्ने व्यवहार विश्लेषण गर्छ र संकेत पाउनासाथ निकटका साथीहरूलाई जानकारी दिन्छ । सँगै फेसबुकले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रशासनलाई जानकारी दिन्छ । तर नेपालमा यो विधि त्यति प्रभावकारी भएको देखिन्न ।
त्यसो हुन्थ्यो भने, निश्चल तामाङलाई बचाउन सकिन्थ्यो । उनले आत्महत्याको समय तोकेर केही घण्टा लाइभमा बसेका थिए । तर, न प्रहरी पुग्यो न परिवार । फेसबुकले समेत ‘अलर्ट’ दिएन । कैयौंले नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेजमा मेन्सन गरेका थिए, तर प्रहरीले तामाङले आत्महत्या गरेपछि मात्र पत्तो पायो । शनिबारको चितवनको घटनामा भने फेसबुक मुख्यालयले यस्तो अलर्ट नेपाल प्रहरीलाई गराएको देखिन्न । प्रवक्ता डीएसपी थापाले आफूहरूले युवती बस्ने घरमै बस्ने अरू व्यक्तिबाट सूचना पाएको बताउँदै भने, ‘फेसबुकबाट त्यस्तो कुनै जानकारी पाएनौं । पाएको भए सायद बचाउन सकिन्थ्यो कि ।’ गोपनीयताको कारण देखाउँदै युरोपले भने फेसबुकको आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण प्रविधिलाई स्विकारेको छैन ।
साइबर ब्युरोका अनुसार कसैले फेसबुकमा आत्महत्या गर्ने संकेतसहितको पोस्ट, फोटो, भिडियो वा लाइभ भिडियोबारेको सूचना प्रहरीले पाउनेबित्तिकै उक्त व्यक्तिको लोकेसनलगायतको सूचना लिन फेसबुकको सिंगापुर र अमेरिकामा रहेको कार्यालयसँग ब्युरोले थप सूचना माग्ने गर्छ । त्यस आधारमा प्रहरी घटनास्थलमै पुग्ने वा आफन्त र छिमेकीहरूसँग समन्वय गरेर आत्महत्याको घटनाबाट व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । फेसबुक मुख्यालयले सम्भावित आत्महत्याका घटनाबारे महानगरीय प्रहरी कार्यालय, साइबर ब्युरो र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलाई अलर्ट पठाउने गर्छ । साइबर ब्युरोका एसएसपीले पनि चितवन घटनाबारे फेसबुकबाट कुनै ‘अलर्ट’ नपाएको बताए । उनले केही घटनामा समयमै अलर्ट पाएर कतिपयलाई बचाउन सकिएको उदाहरण पनि रहेको बताउँदै भने, ‘केही घटनामा भने अलर्ट नपाएको देखिन्छ ।’
फेसबुकले भारतको हकमा भने सम्भावित घटना हुने ठेगानाका आधारमा सम्बन्धित राज्यस्थित प्रहरीकै कार्यालयमा अलर्ट पठाउने गर्छ । जसले गर्दा प्रहरी छिटोभन्दा छिटो आत्महत्या गर्न खोज्ने व्यक्तिको घरमा पुग्न सक्छ । तर, नेपालको हकमा भने त्यस्तो देखिन्न । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेको साइबर सुरक्षा हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार कहिलेकाहीँ फेसबुकको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ले नेपाली भाषा पनि सम्भावित आत्महत्याको सूचना थाहा नपाउन सक्छ । अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा आत्महत्या प्रेरित सूचना वा गतिविधि देखियो भने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा वा शुल्क नलाग्ने प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा वा नजिकैको प्रहरीमा फोन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘समयमै सूचना पाइयो भने आवेशप्रेरित आत्महत्याबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
आधुनिक सुसाइड नोट ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’
विज्ञहरूका अनुसार हरेक व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने सोच पहिल्यै कुनै न कुनै माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेको हुन्छ । सामान्य कुराकानीमा पनि बाँच्न मन नलागेको भावनाहरू पोखिरहेको हुन सक्छ । अझ फेसबुक प्रयोगकर्ताको हकमा पहिल्यै छनक दिएको पाइन्छ । यसका लागि मनोविद् करुणा कुँवरले एउटा उदाहरण दिइन् । एक वर्ष अगाडि राजधानीमै एक स्कुले विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । कुँवरका अनुसार ती किशोरले एक वर्षदेखि फेसबुकमा आत्महत्यासम्बन्धी अनेक पोस्ट गरेका रहेछन्, दु:ख पोखेका रहेछन्, तर कसैले मतलबै गरेनन् ।
‘उनको पोस्टलाई आफन्तले गम्भीर रूपमा लिएको र उनलाई सम्झाएको भए आत्महत्याबाट रोक्न सकिन्थ्यो,’ कुँवर भन्छिन्, ‘तर, त्यस्तो भावनालाई प्राय: बेवास्ता गरिन्छ ।’ उनी फेसबुकमा लाइभ आएर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई ‘सुसाइड नोट’ कै आधुनिक स्वरूप भन्न रुचाउँछिन् । ‘सुसाइट नोटमा पनि मर्नुको कारण लेखिएको हुन्थ्यो, लाइभमा पनि कारण नै भन्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, आफ्नो आफन्त र साथीको सार्वजनिक गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने व्यक्तिभित्रको बेचैनी थाहा पाइन्छ र साथ–हौसला दिएर बचाउन सकिन्छ ।’
बंगलादेशमा गरिएको उक्त अध्ययनले पनि फेसबुकमार्फत व्यक्तिको आन्तरिक छटपटी र आत्महत्याप्रतिको सोच बुझ्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताको मानसिक अवस्था बुझ्न र ख्याल गर्न सहज बनाएको छ ।
‘फेसबुककै आत्महत्या पहिचान गर्ने प्रणाली र प्रयोगकर्ताका पोस्टमार्फत साथीहरूले आत्महत्याको संकेत पाउन सक्छन्, रोकथाममा यो प्रभावकारी हुन सक्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ । यसका लागि धेरैभन्दा धेरै मनोविमर्श आवश्यक पर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञ रिसालको भनाइ छ । फेसबुक पोस्टका प्रकृति र म्यासेन्जरमा बोल्ने शैली बदलिनु पनि यसको संकेत हो । ‘यदि कसैले झुक्किएर पनि मर्ने कुरा गर्छ भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,’ रिसाल भन्छन्, ‘फेसबुक पोस्टले व्यक्तिभित्रको आत्महत्या मनोवृत्ति पहिचान गर्न सहज हुन्छ । नजिकका मान्छेले सकारात्मक निगरानी गर्ने र साथ दिने हो भने आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’
प्रकाशित : असार २३, २०७७ ०९:३८
आर्सनल पुगे विलियन
दोस्रो दिन पनि वर्षाले खेल प्रभावित
बायर्न म्युनिखसँग ८-२ को लज्जास्पद हार बेहोर्दै बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरियो
पिर्लो कति ठीक-बेठीक ?
पाकिस्तानमाथि इंग्लिस बलर हाबी